Sweet Selfie Lite - Selfie Camera, Take A Selfie APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ချိုမြိန် Selfie Lite ကို - Selfie ကင်မရာ, တစ်ဦးက Selfie ကိုယူ
ချိုမြိန် Selfie Lite ကို - Selfie ကင်မရာ, တစ်ဦးက Selfie APK ကိုယူပါ
div class = "ကောင်းကောင်း" id = "app_info">
ချိုမြိန် Selfie Lite ကို - Selfie ကင်မရာ, Selfies ကိုယူ photo.It တည်းဖြတ်ရန် selfie နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးတို့ကိုယူချိုမြိန် Selfie, အလှအပသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ NO.1 selfie ကင်မရာ၏ Lite ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်သင်သည် selfie အသစ်ဖြစ်ကြရင်တောင်သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ 📸
သင်တဦးတည်းဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုချင်နဲ့အလွယ်တကူ selfies ယူချင်လျှင်, သင်က selfie ယူ. ကောင်းသော selfies ရဖို့ဒီ selfie အလှတရားကင်မရာ app ကိုအခမဲ့ selfie app ကိုနဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဤသည် selfie ကင်မရာအမျိုးမျိုးသော selfie အကျိုးသက်ရောက်မှု photo filters များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခေတ်မှီဓါတ်ပုံကိုစတစ်ကာများရှိပါတယ်! သင်၏ဓါတ်ပုံများ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ဖန်တီးမှု selfie ထုတ်လုပ်သူဖြစ်, ဓာတ်ပုံသက်ရောက်မှုနှင့်အတူပိုပြီးအနုပညာဖြစ်လာလိမ့်မည်!
ဒီချိုမြိန်ကင်မရာအခမဲ့ selfie app ထဲမှာ, ပြီးသားခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည့်တစ်ဦးက Selfie သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်ဓာတ်ပုံကိုယူပါ။ ထို့နောက် app ထဲမှာပြင်ဆင်ရန်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ဒီ selfie အလှတရားကင်မရာ app ထဲမှာ, သင်ရုံအော်တိုအလှတရားသို့မဟုတ် photo filters များနှင့်ဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာများချပြီးကဲ့သို့အခြား selfie အကျိုးသက်ရောက်မှုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နှင့်အတူတစ် selfie ယူနှင့်သင့်အလှတရား selfie ပြုသောအမှုသည်တကား ပဲစက္ကန့်အနည်းငယ်နဲ့ကောင်းတဲ့ selfie ဓာတ်ပုံကိုဒါရိုက်တာဖြစ်ရလွယ်ကူတယ်။ selfie အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကောင်းတဲ့ selfie ရ, တစ်ဦးက Selfie ယူယခု selfie အလှတရားကင်မရာအခမဲ့ selfie app ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာစမ်းကြည့်ပါ!
ကဘာလဲဆိုတာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏ဂုဏ်အသရေ selfie ထူးချွန်စေ? သငျသညျလိုဂို၏သင့်ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ချိုမြိန်ကင်မရာ app ထဲမှာအမှတ်တံဆိပ်နှင့် selfie အကျိုးသက်ရောက်မှု photo filters များအားလုံးကြင်နာရှိသည်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့ selfie ကင်မရာ app ကိုနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် selfie app ကိုထူးခြားတဲ့နှင့်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းရှိပါတယ်ကျိန်းသေသငျသညျလူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်ထူးချွန်အလှတရား selfie စေမည်ဖြစ်သော။
✨Letရဲ့ယူ selfies ချိုမြိန် Selfie Lite- ချိုမြိန်ကင်မရာ Selfie အလှအပကင်မရာသည်လူကြိုက်များ selfie ကင်မရာက app ကို 2019 စစ်ထုတ်ပေး, filter များချိုမြိန်ကင်မရာကိုသက်ရောက်မှု & selfie အလှတရားကင်မရာကဖမ်းယူ, filter များဖမ်းယူ, selfie အကျိုးသက်ရောက်မှု, selfie ကင်မရာ, ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာဖမ်းယူဓာတ်ပုံမိတ်ကပ်ကင်မရာနှင့် selfie ကျွမ်းကျင်သူ။ selfie အဘို့ဤ selfie အလှတရားကင်မရာ app ထဲမှာဓာတ်ပုံကိုစတစ်ကာများနှင့် photo filters များကဲ့သို့ selfie အကျိုးသက်ရောက်မှုအားလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ selfie ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို select, ဤချိုမြိန်ကင်မရာ selfie ကင်မရာထဲမှာစတစ်ကာများနှင့် filter add, ပြီးတော့မကယ် enough.Just ခေတ်မှီများမှာ!
, selfie အလှတရားကင်မရာ, မျက်နှာအလှကင်မရာ, selfie ကင်မရာက app ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစတစ်ကာများကင်မရာ, ချိုမြိန်ကင်မရာက app ကို selfie အယ်ဒီတာနှင့်အတူအလှတရား selfies ခံစားကြည့်ပါမကျြနှာကိုကင်မရာ, အလှအပပေါင်း, selfie ကင်မရာ, selfie app ကိုမိတ်ကပ် filter ကိုကင်မရာကိုစစ်ထုတ်ပေး, selfie ကင်မရာ filter များဖမ်းယူ မျက်နှာကကင်မရာကိုစစ်ထုတ်ပေး!
+ 🍉Ultraသေးငယ်တဲ့အထုပ်လူတိုင်း selfies နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ဓာတ်ပုံကိုယူ it.Best selfie အလှတရားကင်မရာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့ selfie app ကို။
+ 🍇Simple user interface ကိုစာမျက်နှာကမှာအားလုံးအလှတရား selfie ရှိသည်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်မခက်ခဲပါ!
အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုနှင့်ဤ selfie အလှတရားကင်မရာထဲမှာကြောက်မက်ဘွယ် filter များနှင့်စတစ်ကာများ၏ + 🍈Allမျိုး။
ဓာတ်ပုံကို Wand မှ Collage တည်းဖြတ်ရန် + 🍊Bestဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ။ သင့်ရဲ့ selfie ပိုပြီးချစ်စရာနှင့်ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောလုပ်အခမဲ့ဒီဇိုင်း! ဒီကင်မရာက Selfie app ကို လာ. ကြိုးစားကြ!
+ 🍒Soအတော်များများချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘောင်, ဒီဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာကိုသင် pic ကိုတစ်အနုပညာစတိုင်လ်ဖန်တီးဖို့နဲ့သင်တို့ကိုလည်းအရမ်းတစ်ဦး collage လုပျနိုငျဆိုလိုတာကဇယားကွက်ဘောင်နှင့်ဓာတ်ပုံစတစ်ကာများနိုင်သည့်အနုပညာဘောင်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ ဒါဟာ selfies နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ဓာတ်ပုံကိုယူဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
+ 🥥Take selfies နှင့်အလှအပအကျိုးသက်ရောက်ရှိသည်။ Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat သို့မဟုတ်အခြားမီဒီယာ: လူမှုကွန်ယက်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဝေမျှမယ်ဓာတ်ပုံများ။
အခုတော့ဒီကင်မရာ selfie app ထဲမှာတစ်ဦးက Selfie ယူချိုမြိန် Selfie Lite ကိုမှလာကြ။ သင်တို့ရှေ့မှထက်အကြိုက်များပိုမိုရရှိရနှင့် selfie မာစတာနိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ friends.You နှင့်အတူတစ်ဦးအလှတရား selfie နှင့်ရှယ်ယာများတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီဓာတ်ပုံကို editing tools ကိုသုံးပါ! မင်္ဂလာပြုလုပ်ပျော်မွေ့!
Facebook မှာ: @Sweet Selfie
Instagram ကို: @Sweetselfie_official
1 ။ တိုးတက်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုသင်ပိုမိုအဆင်ပြေအသုံးပြုရန်နိုင်အောင်!
ချိုမြိန် Selfie Lite ကို - Selfie ကင်မရာ, တစ်ဦးက Selfie ကိုယူ
43.76 ကို MB
SnapCam တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှမျက်နှာ stikers
ချိုမြိန် Selfie: ...